Madaxweynaha Malaawi oo khatar ku tilmaamay qaxootiga Soomaalida ee marinka ka dhigtay dalkaas – Radio Daljir
Madaxweynaha Malaawi oo khatar ku tilmaamay qaxootiga Soomaalida ee marinka ka dhigtay dalkaas
Nofeembar 30, 2013 2:35 b 0
Lilongwe, November 30, 2013 – Dowladda Malaawi ayaa walaac daran ka muujisay qaxootiga ku sii qulqulaya koonfurta Afrika ee inta badan marinka ka dhigta dalkaas, oo ku dhow Jamhuuriyada Tanzania oo ah meelaha ugu badan ee qaxootigu maraan.
Madaxweynaha Malaawi Joyce Banda oo la hadashay wargayka The Telegraph? ee britian, waxay sheegtay in dadka qaxootiga ah gaar ahaan Soomaalida ay dhibaato ba?an ku hayaan dalkeeda, waxay walaac ka muujisay khatarta ka iman karta qulqulka qaxootiga.
?In badan baan saaxiibadeen kala hadalnay in aan xal u helno arrinta qaxootiga dalkeenna soo gelaya, kadibna u sii gudbaya dalalka kale.? Ayey tiri Madaxweyne Banda ?bilo markay joogaan waxay qaataan soomaalidu baasaboorka dalkeenna, deedna waxay u dhoofaan UK iyo USA.?
Madaxweynaha ayaa si caro leh u tiri ?xuduuda ayaan dhigi doonaa ciidamo fara badan, iyagoo lugaynaya ayey ka soo degaan buuraha, kadibna waxay soo galaan dalka iyagoo ku socda si sharci daro ah.?
Soomaalida ugu badan ee jooga koonfurta Afrika, Mozambique ilaa Zambia ayaa inta badan waxay maraan dalka Malaawi, sidoo kale isla dalkaas ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay Soomaalidu ku nool yihiin dhanka koonfurta qaarada Afrika.
RW Saacid oo dhalinyarada Muqdisho ku booriyey in ay ka qayb qaataan horumarka dalka (Dhegeyso)